Samsung Odyssey G7: Kormeeraha ciyaarta oo aad u dhameystiran | Wararka Gadget
Dhamaadkii sanadkii hore shirkadda South Korea waxay soo bandhigtay taxane ah alaab ciyaar iyo gaar ahaan baaxada Odyssey, shaashadaha ujeeddadaas oo ay shirkaddu u qeexday dadka isticmaala si ay uga faa'iidaystaan ​​cayaaraha fiidiyowyadooda.
Markan waxaan ku leenahay miiska imtixaanka mid cusub Samsung Oddysey G7, oo ah kormeeraha dhamaadka-sare qalooca oo si gaar ah loogu talagalay ciyaaraha. Nagala soo baar falanqeynteeda qoto-dheer oo ogow sida ay uqalanto wax iibsigaagu. Waxaan kuu sheegeynaa waxa aan u maleyno iyo natiijada ugu dambeysa ee falanqeynteennu ay ahayd.
1 Naqshadeynta iyo agabka: Ujeeddada "ciyaarta"
2 Astaamaha farsamada ee guddiga
3 Dejinta iyo isku xirnaanta
4 Adeegso khibrad iyo qiimeyn
Naqshadeynta iyo agabka: Ujeeddada "ciyaarta"
Si daacadnimo ah, caado ku darida LED-yada badan ee RGB-yada wax kasta oo ujeedkeedu yahay "ciyaar" waa wax aan aniga igu habboonayn gaar ahaan, waxaan doorbidaa naqshadaha miyir-qabka ah. Si kastaba ha noqotee, Samsung waxay ku guuleysatay inay soo bandhigto fikraddan iyada oo aan loo baahnayn, taasina si madaxbannaan ayey nooga yaabisay. Waxaan ku bilaabaynaa iyada oo la tixgelinayo mid ka mid ah dhinacyada ugu kala duwan, qalooca 1000-milimitir oo ah muujinta ugu badan marka la eego kormeerayaasha qalooca. Tan waxaa sii dheer dhimista dhinaca iyo birta sare oo ay weheliso naqshad xoog badan oo xagga hoose ah, oo ay ku sarreeyaan laba shaashadood oo RGB ah oo leh gees walba.
Peso wadar ahaan: 6,5 Kg
Cabbirada dhumucda salka: 710.1 x 594.5 x 305.9 mm
Darbiga dambe waxaan ku leenahay taageero si wanaagsan loo dhisay oo leh keeb gudbiye, sidoo kale RGB LED ring mar kale, taasi waxay leedahay googoyn doonta iftiinka iftiinka. Tani way iska yara yaraan doontaa kiisaska oo dhan iyo gaar ahaan waa la ogaan karaa markaan ka hadlayno isticmaalkeeda gebi ahaanba mugdiga, waxay noqon doontaa kiiska ay ka muuqan doonto darbiga. Saldhigga waa lagu hagaajin karaa dhererkiisa ilaa 120 sentimitir wuxuuna: janjeeri karaa inta udhaxeysa - 9º iyo + 13º, wareejin - 15º iyo + 15º iyo udub dhexaadka -2º iyo + 92º. Kormeerka waxaa lagu dhisay ugu horreyn caag madow oo leh dhammaystir macdan ah oo xoog leh.
Astaamaha farsamada ee guddiga
Waxaan ku bilaabaynaa, sida cad, guddiga kormeerka oo laga yaabo inuu yahay midka ugu habboon ee ka mid ah agabyada badan. Waxaan leenahay nooc ka mid ah 31,5-inji VA guddi oo leh a 16: 9 dhinac aad u caadi ah. Guddigan VA-ga ah iyo nashqaddiisa aadka u qalooca waxay ka dhigeysaa oo kaliya in lagu riyaaqo quruxdeeda ugu sarreysa markii aan si fiican isugu taagno hortiisa, waa inaan iska iloobin adeegsiga sariirta ama qodobbada aan tooska u ahayn midka dhexe. Kormeerahan Samsung waxay dooratay QLED, tiknoolajiyada ay ku guuleysatay guulo badan.
Xalka asalka ah ee kormeeraha waa 2560 x 1440 pixels, Taasi maahan wax xun in la raaxeysto ciyaaraha jiilka xiga ee PC-ga, iyo sidoo kale iswaafajinta buuxda ee aaladaha sida PlayStation 5. Waxaan halkaan ku heynaa celcelis dhalaalka 350 cd / m2 oo leh ugu badnaan 600 cd / m2 meelo gaar ah. Qiyaasta farqiga udhaxeysa waxay gaareysaa ilaa 2.500: 1 in aanaan jecleyn wax badan, haa, iswaafajinta guddiga ayaa lala qabsan doonaa NVIDIA G-Sync iyo iswaafajinta AMD FreeSync.
Kala duwanaanta firfircoon ee ay bixiso, kiiskaaga HDR600 Waa in la dhaho kama aanan helin iyada oo si xad dhaaf ah u garaacaysa sidoo kale. Heerka dib-u-cusbooneysiinta, haa, waa kan ugu sarreeya suuqa iyada oo aan la dul-marin, oo gaaraya illaa 240 Hz. Dhinaca kale, 240 Hz waxaan kaliya ugu adeegsan karnaa midab qoto dheer oo ah 8 jajab, waa inaan hoos ugu dhaadhacno heer dhexdhexaad ah 144 Hz si aan ugu raaxeysanno guddi 10-bit ah. Dhanka kale.
Dejinta iyo isku xirnaanta
Kormeerahani wuxuu leeyahay a nidaamka software isku dhafan in lagu shaqeeyo joystick-ka hoose. Dhexdeeda waxaan ka heli doonnaa dejin labadaba heerka isku xirnaanta iyo qaabeynta, in kasta oo aysan iila muuqan wax aan macquul ahayn. Waxaan la tacaali karnaa arrimaha sicirka cusboonaysiinta iyo kuwa kale. Dhexdeeda ayaynu ku arki doonnaa waqtiga dhabta ah "impu-tlag" ee xaalad kastoo jirta ay ku sii jirtaa 1ms ugu yaraan imtixaannadeenna.
U guurista isku xirnaanta, waxaan dooneynaa inaan helno laba cabbir oo heerkoodu sarreeyo oo USB 3.0 ah, oo ah deked dhaqameed USB Hub ah haddii aan rabno inaan ku darno nooc ka mid ah waxyaabo dheeraad ah oo xiiso leh, iyo sidoo kale laba DisplayPort 1.4 iyo dekedda HDMI 2.0. Gabi ahaanba waxba kama maqnaan doontid, inaad cod raadisid mooyaane, waxaad yeelan doontaa wax soo saar sameecadeed laakiin waxaad hilmaami doontaa kuwa ku hadla. Faahfaahin dheeraad ah, Ku darista kaliya dekedda HDMI, xitaa waan heli karnaa xoogaa xoogaa ah markaan ku darno bar dhawaaqa si kor loogu qaado khibradeena guud.
Adeegso khibrad iyo qiimeyn
Waxyaabo aad u xagjir ah ayaan had iyo jeer haysannaa dhadhan macaan. Xaaladdan oo kale qalooca sare waa in la jeclaado ama la neceb yahay. Wareegga 1000R wuxuu macno badan u sameynayaa kormeerahan oo kale, in kasta oo aanu qofna ilaa hadda tijaabin. Shaashadani waxay si buuxda noo dabooshaa oo mashquul ku tahay inta badan muuqaalkeenna muuqaalka ah, tani waxay leedahay faa'iido cad oo ka badan ciyaarta. Dareenka bilowga ah ka dib xiriirkii ugu horreeyay ee lala yeesho kormeeraha waa mid ka mid ah fajac run ah, oo aan macquul aheyn in lala yaabo.
Si dhakhso leh ayaad ula qabsaneysaa, gaar ahaan markaad kaliya u isticmaali doontid inaad ku ciyaarto. Markaad qorsheyneyso inaad isaga la shaqeyso, arrimuhu way is beddelaan, waana sidaas Sababtaas awgeed, ayaa loogu daray qalooca xagjirka ah, taas oo ah kormeer aan aad u badnayn, si aad ah loogu talagalay ujeeddadeeda, «ciyaaraha». Dhex-dhexaadku waa mid gebi ahaanba ah, laakiin waxaa loogu talagalay oo keliya oo loogu talagalay dadweynaha gamer. Si kastaba ha noqotee, haysashada laba kormeerayaal oo ah cabbirkan dusha sare ee desktop-ka waxay umuuqataa mid adag, marka waa inaad iska cadaataa qiimaha la bixinayo marka aad go'aansato inaad u adeegsato ujeedooyin kale, maxaa yeelay daawashada filimada booska ciyaarta ma noqon karto midka ugu raaxada badan.
Intii aan ku guda jirnay baaritaanka, waxaan xaqiijinay in Samsung ay sii deysay cusbooneysiin qalabaysan oo loogu talagalay kormeeraha, tan waxaa si sahlan loogu rakibay mid kasta oo ka mid ah dekedaheeda USB-ga waxayna siineysaa calaamad wanaagsan taageerada ay gadaal ka riixeyso. Si kastaba ha noqotee, qiimaha waa waalli dhab ah, oo kaliya ayaa heli kara kuwa doonaya inay sida ugu badan uga faa'iidaystaan ​​awooddooda arrintan la xiriira,Samsung G7 (C32G73TQSU) ...
Tani waxay ahayd falanqeyn qoto dheer oo aan ku sameynay Samsung's Odyssey G7, oo ah kormeer aad u qaloocan oo aad u xagjir ah oo loogu talagalay ciyaartoyda ugu badan, xusuusnow inaad nooga tagi karto wixii su'aalo ah sanduuqa faallooyinka.
Ku dhejiyay: 21 April 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 18 April 2021
Qalooc aad u xagjir ah
Iswaafajinta sare iyo heerka cusbooneysiinta wanaagsan
Taageero farsamo iyo qaabeyn wanaagsan
Dakado badan oo kale ayaa la la’yahay
Qiime ay ku gaari karaan dad yar
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Samsung Odyssey G7: Kormeere ciyaaraha oo aad u dhameystiran